အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်
Posted by etone on Jul 12, 2012 in Community & Society, Critic, Jobs & Careers, My Dear Diary, Opinions & Discussion | 27 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း အလုပ်သမားဆိုတာ ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းမဟုတ်
ဟိုးတရက်က ကိုဘုန်းကျော် ရေးသွားပြတဲ့ သြဇီမှာ အလုပ်သမားရေးရာအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေက အလုပ်ခွင်ထဲအထိ လာရောက်ပြီး ၊ အလုပ်သမားတွေပြောချင်တာတွေ ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ကွင်းဆင်းပြီးတိုက်ရိုက်နားထောင် တဲ့အကြောင်းလေးဖတ်မိတော့ ……… ကျွန်မစိတ်ထဲ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ … ဆက်နွယ်မှုကို ….. နှိုင်းယှဉ်စိတ်တွေရော ၊ အားမလို အားမရစိတ်တွေရော ..သိမ်ငယ်အားငယ်စိတ်တွေရော တပြိုင်နက်တည်းခံစား သွားမိတယ် …
ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ Fair Work Act ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ …. http://myanmargazette.net/136111/uncategorized-other/copypaste
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ … နိုင်ငံသားပိုင်ရော ၊ နိုင်ငံသားအမည်ခံ နိုင်ငံခြားသားပိုင်တွေရောတည်ထောင်ထားတဲ့ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နဲ့ အခြားသော လုပ်ငန်း ၊ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာရှိပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ လာရောက်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာကတော့ … ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရရော ၊ တခြားသောအကြောင်းကြောင်းကြောင့် အများကြီးရှိပေမယ့် ….. အလုပ်သမား ပေါပေါများများ ရလို့ရယ် ၊ လုပ်အားခသက်သာလို့ရယ်က အဓိက အချက်တွေထဲပါဝင်ပါတယ် … ။ နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်း ရှင်တွေ ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာလို့ မြန်မာ့လူထု အလုပ်လုပ်ခွင့်ရလာတယ် ၊ ၀င်ငွေလစာ ရလာတယ် အလုပ်ကိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ပိုများလာတယ် ဒါကြောင့် စက်ရုံအလုပ်ရုပ်တွေ ၊ စက်မှုလက်မှုတွေ ထွန်းကားလာတာ နိုင်ငံသားပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နိုင်ငံသားအမည်ခံပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့လို အခြေခံလူတန်းစားဘ၀တွေအတွက်တော့ .. အလုပ်ကိုင်ရရှိဖို့ အခွင့်လမ်းများလာတဲ့အတွက် ၀မ်းသာ ကြိုဆိုစရာပါ ။
ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အလွှာတန်းစားမျိုးစုံက တာဝန်ရှိပြီး အုပ်ချုပ်သူတွေ ၊ ၀န်ထမ်းတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အလုပ်ရုံတွေမှာ ၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရေးပါလွန်းတာမို့ … အလုပ်ခွင်သာယာမှုရှိဖို့ အထူးလိုအပ်တာပေါ့ ။ အလုပ်ခွင်သာယာမှုလို့သာ သုံးနှုန်းလိုက်ပေမယ့် … တယ်လိုအပ်နေတာ တရားမျှတတဲ့ အလုပ်ခွင်ဖြစ်တည်မှူမျိုးပါ ။ ကုမ္ပဏီတွေ ၊ စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ rules တွေအရ အလုပ်သမားတွေအရေးအတွက် HR ၀န်ထမ်းတွေ ၊ dept တွေထားရှိ ခန့်အပ်ထားပေမယ့် … တကယ်တမ်း အလုပ်သမားအရေးထက် ၊ အလုပ်ရှင်ရဲ့ အလိုကျ ကြိုးဆွဲရာ ကနေကြရတာ များပါတယ် ။ အလုပ်ရှင်ဆီက လစာယူပြီး …. အလုပ်ရှင်အမုန်းခံပြီး ကြားနေဖြေရှင်းပေးမယ့် HRမျိုး အတော်ရှားတယ် …. ။ အလုပ်သမားတွေအတွက် မားမားမတ်မတ်မရပ်တည်နိုင် ၊ မျှမျှတတမဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်အတူတူ ၊ HR dept ထားတာ ၊HR ၀န်ထမ်းတွေ ခန့်တာ …. ငွေပိုဖြုန်းတီးရာမရောက်ဘူးလားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလည်း ဖြစ်မိပါတယ် ။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်း ၊ အောက်ခြေထိ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး စကားသံနားထောင်ဖို့မပြောနဲ့ …. HR dept တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတောင် သူတို့ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲပုံတွေ ၊ ပြသနာဖြေရှင်းပုံတွေ ၊ အလုပ်သမားတွေအတွက် တရားမျှတတဲ့ အလုပ်ခွင်ဖြစ်တည်ရေးပြုလုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကို ၊ ကွင်းဆင်းပြီးထိစွာ control ဖို့အချိန်မလောက်ငှတာ ၊ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပါတယ် ။ ကျွန်မတို့လို အခြေခံ လူတန်းစား ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ၊ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ ရမယ့် ၊ အခွင့်ရေးတော့ ရှိသင့်တယ်မဟုတ်လားနော် ။ အခုတော့ အလုပ်သမားတွေ မတရားခံရမှုကြောင့် ဆန္ဒပြတော့မှ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ ၊ တစ်ခုခုပြောချင်ဆိုချင်လျှင် အလုပ်ခွင်ကနေ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့လည်းမဖြစ် ၊ HR ကလည်း သူဌေးသဘောကျမို့ တဆင့်ခံဆက်သွယ်လို့လည်းမဖြစ်တော့ ၊အသံနည်းနည်း ထွက်တော့မှသာ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခွင့် ရမှာလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ ။ ဒီအချက်ကလည်း .. ဆန္ဒပြမှုတွေ ၊ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ များပြားလာစေတဲ့ အကြောင်းရာတွေက တစ်ခုဆိုလျှင် မှားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးနော် ။ ခံစားချက်တွေများလာပြီး ပွင့်အန်ထွက်တဲ့အခါမှာ ဆန္ဒပြခြင်းနဲ့ သူတို့ရင်ထဲက အပူမီးတွေ ဖော်ထုတ်ပြကြတယ် ။
ဒီအလုပ်ခွင်မှာ အဆင်မပြေလျှင် ၊ ဒီလစာနဲ့ မကျေနပ်လျှင် ၊ ဆန္ဒပြမှုတွေမလုပ်ပဲ ၊ တကျီကျီ အကြွေးပူရစရာရှိသလိုမတောင်းသင့်ပဲ တခြား ပိုပေးနိုင်မယ့် ၊ ပိုအဆင်ပြေနိုင်မယ့် အလုပ်ကိုပြောင်းသင့်တာ ၊ ကျွန်မတို့ အလုပ်သမားတွေ လက်ခံနားလည် သဘောပေါက်ထားပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ကို အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးပြီး လစာပေးတဲ့ လူတွေကို ၊ ကျွန်မတို့က သားရေပေါ်အိတ် ၊ သားရေနားစားပြီး ကျေးဇူးကန်းတာမျိုး လုပ်တာမဟုတ်ပေမယ့် …… မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်ရုံစက်ရုံတည်ထောင်မယ်ဆို ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနိုင်ငံရဲ့ စည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ကျွန်မတို့အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်ရေးဟာလည်း ပြဌာန်းချက်အတိုင်းပဲ ဖြစ်သင့်တာပေါ့ ။ ပြောရလျှင် ကိုယ့်လုပ်အားတန်ဖိုး 100ဆိုလျှင် လစာလည်း 100 ပေးသင့်တာမျိုးပါ ။ လုပ်အားတန်ဖိုး 100ကို … ရတဲ့ လစာနဲ့အခွင့်ရေးက 10ဖိုးလောက်ဆိုလျှင်တော့ ၊ ကိုယ့်ကိုအလုပ်ပေးထားတာမှန်ပေမယ့် ကျေးဇူးရှင်တွေလို မမြင်မှတ်နိုင်ပဲ ၊ လူတွေကို အသုံးချထုတ်ကုန်အဖြစ်လုပ်နေတဲ့ … မတရားဖိနှိပ်မှုလို့ပဲ မြင်မိမှာပါ ။ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မျိုးဆိုလျှင် ဘယ်လိုများမှ အလုပ်သာယာနိုင်ပါ့မလဲ ၊ ဒီလိုပါပဲ HR ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ တာဝန်မကျေပွန်မှုကြောင့်လည်း တရားမျှတမှုရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တည်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ HR တွေတာဝန်မကျေဘူးဆိုတာကတော့ …. အလုပ်ရှင်လစာယူပြီး .. အလုပ်ရှင်မှားလျှင်တောင် မထောက်ပြရဲတာကိုဆိုလိုတာပါ ၊ အလုပ်သမားတွေအတွက်မျှတမှု မရှိတာကို ဆိုလိုတာပါ ။ အမှန်တရားကို မထုတ်ပြရဲတာကို ဆိုလိုတာပါ ။သူတို့ခမျာလည်း အလုပ်ရှင်က သေဆိုသေ ၊ ရှင်ဆိုရှင်ဘ၀မို့ ဒီလိုဖြစ်တာလို့ နားလည်မိပေမယ့် ၊ လက်ခံဖို့တော့ ကြိုးစားလို့ မရသေးပါဘူး ။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ရှိနေပါလျှက် အလုပ်သမားတွေအတွက် တရားမျှတတဲ့အလုပ်ခွင် ဖန်တီးမပေးနိုင်ခဲ့ပါလျှင် ၊ ကျွန်မတိုကအခြေခံ လူတန်းစားတွေ ၊ ဘယ်သိကြား ၊ ဘယ်နတ်ဘုရားကို တိုင်တည်ကိုးကွယ်ပြီး ဆုတောင်းရပါတော့မလဲ ။ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ စည်းမျဉ်း၊ ဥပဒေတွေပြဌာန်းချက်တွေကို ဖတ်ရတာ ၊ အလွန်အားရစရာကောင်းပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ၊ အလုပ်ရှင်ကလည်း ဒီစဉ်းမျဉ်း ဘောင်တွင်းကမဟုတ်သလို ၊ HR တွေကလည်း ဒီစဉ်းမျဉ်းဘောင်တွင်းမ၀င်နိုင်တော့ …. စာအုပ်ထဲမှာသာ ရှိတဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေလိုလိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့ ။ အလုပ်သမားနဲ့ အလုပ်ရှင် တစ်ခုခုပြသနာ တက်ကြေးဆို ၊ ငွေများ တရားနိုင်ဆိုတဲ့စကားထဲကလို ၊ အလုပ်ရှင်တွေဘက်က အပေါ်စီးရ ၊ အနိုင်ရတတ်တာမို့ ၊ ကျွန်မတို့လို အလုပ်သမားတွေအတွက် အားငယ်စိတ်လည်း ဖြစ်မိပါတယ် ။ မတရားမှုတစ်ခုခုအတွက်သာ ကိုယ့်အခွင့်ရေး အပြည့်ဝရဖို့ တောင်းဆိုကြည့် ၊ အခြေခံ လစာ သုံးလစာပေးပြီး နားသွားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော် … ။ မရှိလို့ လုပ်စားတော့ မိုးခေါင် ၊ ခိုးစားတော့ ခိုးဟောင်ဆိုသလိုများဖြစ်လေမလားလို့ စိတ်ပူမိပါတယ် ။
ဟိုးတစ်လောက ကျွန်မရေးခဲ့ဖူးပါတယ် အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေကြားမှာ စာချုပ်တစ်ခု လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါ ။ ကိုဖက်တီးကတ်ရဲ့ ကော့မန့်လေးကလည်း အရမ်းကောင်းအောင် ထောက်ပြထားတာ သတိရမိသေးတယ် ။ အရီးလတ်တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် ၊ အန်ကယ်ကြီးတို့ လေးပေါက်တို့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကိုဖတ်ရတာလည်း ပို့စ်ထက်တောင် ပိုပြီးအတွေးပွား ၊ ဗဟုသုတးများစေပါတယ် ။ တခြားလူတွေရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကော့မန့်တွေကလည်း တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာပါ ။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား စာချုပ်တစ်ခုလို http://myanmargazette.net/126033/society-lifestyle/ethnicity-gender-lifestyles-subcultures-morals-values-norms-society-lifestyle
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ နှုတ်ကတိတွေပဲ ပေါပေါသီသီဖြစ်နေလို့လား ၊ စာရွက်များ ရှားပါးလို့ပဲလားမသိဘူး … အလုပ်ခွင်ဝင်လျှင် စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ လုပ်တဲ့ ဓလေ့ … အန်ဂျီအိုတွေကလွဲလျှင် … အလုပ်တော်တော်များများမှာကျင့်သုံးမှု အားနည်းတယ် ။ အထူးသဖြင့် လူဦးရေများစွာ ခေါ်ပြီးခန့်ထားရတဲ့ အလုပ်ရုံ ၊ စက်ရုံလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့ ။ ဒီလို စာချုပ်မျိုး လက်ဆုတ်လက်ကိုင် မရှိတာကြောင့် အလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်း အလုပ်ခန့်တာမျိုးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ လစာ တိုးတာနဲ့ပတ်သတ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ နှုတ်ကတိမျိုး ၊ စကားအရာနဲ့သာ ပြောခဲ့ကြပြီး ပြသနာဖြစ်တော့မှ ၊ ဒီလစာပဲပေးမယ် ၊ ဆက်လုပ်ချင်လုပ် ၊ မလုပ်ချင်မလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားမျိုးထွက်လာတာ ခဏခဏ ကြားဖူးခဲ့ပါတယ် ။ အလုပ်စ၀င်ခါစကတော့ ခေါင်းပုတ်၊နားရွက်သက်ပြီး နှာနှပ်ထားလို့ ရမယ့် ကြောင်လေးခွေးလေးတွေလို သဘောထားပြီး ၊ အလုပ်မှာ စာချုပ်စာတန်းနဲ့ မရှိတော့မှ တိုးသင့်တဲ့အချိန်လစာတိုးချိန်မှာ မတိုးတာမျိုး ၊ ထွက်ချင်လျှင်ထွက်လို့ ပါးစပ်စည်းမရှိတိုင်း ၊ ဥပဒေစာချုပ်စာတမ်း မရှိတိုင်းပြောတဲ့အခါ ၊ နစ်နာသူက အလုပ်သမား ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါလား ။ ဒီလို အခြေနေမျိုးမှာ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မလဲ ။ စာချုပ်စာတမ်းမရှိလို့ အလုပ်ခန့်တာ တရားမ၀င်ဘူးဆိုပြီး …အဲ့အချိန်မှ ထပြောကာ အလုပ်ရှင်ဘက်ကမျက်နှာလို မျက်နှာရများ လုပ်လေမလားရယ်လို့ တွေးပူမိပါတယ် ။ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တတ်တဲ့ အနေထားမျိုး ဘ၀မှာ ခဏခဏ ကြုံခဲ့ဖူးတော့လည်း အားကိုးအားထားပြုနိုင်မယ့် အဖွဲ့စည်းအဖြစ် ၊အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒဖြစ်မိလို့ပါ ။
တစ်လောကလည်း စက်ရုံတစ်ခုမှာ ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာ စက်ရုံဘက်က အလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုချက်အချို့ကို ညှိနှိုင်းလိုက်လျောသင့်တာ လိုက်လျောခဲ့ပေမယ့် အသက်မပြည့်သူ (၁၈)နှစ်အောက် အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်မှ ရပ်နားခဲ့တယ် လို့လည်း ကြားသိရပါတယ် ။ အဲ့ဒါကိုပဲကြည့် အလုပ်ခန့်ကတည်းက စည်းမျဉ်းတွေ ၊ ပြဌာန်းတာတွေ မလိုက်နာပဲ အသက်မပြည့်တဲ့ လူတွေကို အလုပ်ခေါ်ခန့်တယ် ၊ ပြသနာတက်လို့ ရှင်းရတော့မယ်ဆိုတော့မှ အသက်မပြည့်သေးလို့ အလုပ်ကနေရပ်နားတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။ ဒါက ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုအကြောင်းပါ ၊ အခုလက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ စက်ရုံတွေ အလုပ်ရုံတွေမှာရော ၊ အသက်မပြည့်သေးပဲ အလုပ်ခန့်အပ်ထားသူ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိဦးမလဲ … ။ 20~30%လောက်က အသက်မပြည့်သေးသူများပါနိုင်ပါတယ် ။ လိုတဲ့အခါ ဆွဲသုံးပြီး မလိုတော့မှ ကန်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀ကို စာနာလို့ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက ကွင်းဆင်းလေ့လာမယ်ဆိုလျှင်တောင်မှ ၊ သူဌေးအလိုကျ HR ၀န်ထမ်းတွေက မွေးသကရာဇ်ပြင်တာမျိုး လုပ်မထားဘူးလို့ ဘယ်သူအတပ်ပြောနိုင်မှာပါလဲ ။ အလုပ်သမားလေးတွေကို အသက်ပြည့်ပြီးကြောင်း ပြောဆိုတတ်ရင် သင်ပေးထားတာမျိုး လည်း လုပ်နိုင်ပါသေးတယ် .. ဒါကြောင့် ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်တွင်လာစစ်ဆေးမယ်လို့ ကြော်ငြာထားခြင်းမရှိ ၊ လမ်းကြောင်းကြိုပြောထားခြင်းမရှိပဲ ရှောင်တခွင်ဝင်ရောက် စစ်ဆေးမှသာ အမှန်တိုင်းသိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
ယခုစက်ရုံတွေမှာ … စက်ရုံတွင်းကလူတွေနဲ့ပဲ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အခြေခံ အလုပ်သမား အဖွဲ့ တွေ ရှိနေပါပြီ ။တစ်လောက ဂရုမေးလ်တစ်ခုကနေရတဲ့ ….. စက်ရုံတစ်ခုရဲ့ အခြေခံ အလုပ်သမား အသင်းရည်ရွယ်ချက်ကို ကိုးကားပြီးပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသတဲ့ …. (စက်ရုံနာမည်ကိုတော့ ကွန်ဖီဒန်ရှယ်လ်မို့လို့ ချန်လှပ်ပေးထားပါတယ်) ။
အခြေခံအလုပ်သမား အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
၁။ ။ အလုပ်သမားတို့၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများကို တည်ဆဲဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန်
၂။ ။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားထုကြား နားလည်မှု အပြန်အလှန် ရှိစေရန်နှင့် အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူရစေရန်
၃။ ။ ပြဿနာ တစ်စုံတရာ ရှိလာပါက ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း နှင့် လူမှုရေး ရှု့ထောင့်တို့မှ မျှတသင့်လျှော်သောအမြင်ဖြင့် ကြားဝင် ညှိနှိုင်းပြေလည်မှုရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
၄။ ။ အလုပ်သမားများ အသိဥာဏ်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာပြီး မိမိတို့ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်လာသကဲ့သို့ မိမိတို့ တာဝန် ကိုလည်း သိပြီး “အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန် “ ကိုပူးတွဲနားလည်လာစေရန်
၅။ ။ အသင်းမှ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပရဟိတ ဒါန နှင့် လုပ်ငန်းခွင် သာယာချမ်းမြေ့မှုရှိစေရန် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရန်
၆။ ။ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတင်းဖလှယ်ခြင်း၊ နည်းပညာဖလှယ်ခြင်း၊ အသိဥာဏ်ဖလှယ်ခြင်း တို့ပြုလုပ်ရန်
၇။ ။ ILO နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး နည်းဥပဒေနှင့် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း ကိစ္စများတွင် အကြံဥာဏ်များရယူ၍ အလုပ်သမားထု၏ ယုံကြည်အားကိုခြင်းကို ရရှိရန် ။
အပြောကတော့ ရွှေမန်း ၊ အကကျမှ ချိုမိုင်မိုင်ဖြစ်လေမလားလို့လည်း ရင်မောစွာ မ၀ံ့မရဲ စောင့်ကြည့်မိပါတယ် ….. ။အခြေခံ အလုပ်သမားဖွဲ့သည်ထားဦး…… ခေါင်းဆောင်တွေက …အလုပ်သမားတွေထဲကပေမယ့် သူဌေးအလိုတော်ရိတွေ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလျှင်တော့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ခရီးပေါက်ပါ့မလား စဉ်းစားစရာဖြစ်မိပါတယ် ။ အလုပ်သမားအရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အသင်း၊ အဖွဲ့စည်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကိုက ကရုဏာစိတ်ပြည့်ဝပြီး ၊ စာနာစိတ် ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ လက်ကိုင်ထားနိုင်သူမျိုးသာဖြစ်သင့်တာပါ ။အလုပ်သမားတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ အဖွဲ့စည်း၊ အသင်းဖွဲ့မှန်သမျှ ၄င်းတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ၊ စည်းမျဉ်းတွေ ၊ ပြဌာန်းချက်တွေအတိုင်းသာ လုပ်နိုင်ကြမယ်ဆိုလျှင်တော့ … ၀မ်းသာအားရ .. သာဓုခေါ်လိုက်ချင်ပါတော့တယ် ……… ။ ။
ရုံးဆင်းခါနီးတင်တယ်ဟေ့ …… ပို့စ်ကရှည်တယ်နေရာဦးထားမယ် ……
ဧကန်ဒ သူလည်း အလုပ်ရှင်နဲ့ မပြေလည်ဘူးထင်ပါ့
မခိုင်ရေ … ဖျာလေးနဲ့ ဦးတာလား .. ဘာလေးနဲ့ ဦးလိုက်တာလဲ .. အဟိ … ။
ကိုအရင့်ရောင် … အလုပ်ရှင်နဲ့တော့ မပြေလည်စရာလောလောဆယ်မရှိပါဘူး …. စိတ်ထဲ .. အလုပ်သမားအခွင့်ရေး ဆုံးရှံးနေတယ်ထင်လို့ … ။ ဟိဟိ … နည်းနည်းလေးပွားမိတာပါ … ။
အားကိုးအားထားပြုနိုင်မယ့် အဖွဲ့စည်းအဖြစ် ၊အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒဖြစ်မိလို့ပါ ။
မအိတုံရေ ဆန္ဒတွေမစောပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနက အလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်စလုပ်တာ မကြာသေးမှီကမှ စခဲ့လို့ပါ။။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ဘဲညှို့နိုင်းလုပ်ခဲတာများခဲ့လိုပါ။မကြာမှီလာမည်—–မျှော်။
ဂျပန်သူဌေးဆီမှာ ၂နှစ်အလုပ်မလုပ်ရဘဲ လခယူနေရတာကြာတော့ ရှက်လါတယ် တစ်နေ့မှာ သူဌေးလါတော့ ကျွန်တော်ကအလုပ်ထွက်တော့မယ်ပြောတော့ ဘာကြောင့်လဲမေးတော့ ကုမ္မဏီက၀င်ငွေမရှိတော့ ငါလခယူရတာ ရှက်လါလို့ပါပြောတော့ (ဘက)အရှုးသန့်ရှင်းရေးဘဲလုပ်ကွာဆိုပြီး ဆူသွားခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့ကုမ္မဏီဘောနက်(စ်)ပေးတဲ့နေ့ ဘိုးလိန်းကစားရုံမှာရှယ်ယာသူဌေးတွေ စုထိုင်နေရာက ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး မင်းတို့(ဘိရုမာ)ဗမာရဲ့စိက်ဓါတ်တွေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသလို
ငါတို့(နီဟွန်းဂျင်း)ဂျပန်လူမျိုးတွေ အကြောင်းလဲပြောပြမယ်နော်ဆိုပြီး ငါတို့ကုမ္မဏီလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကြော်
(ဥပမာ)တစ်နေ့ကို တစ်သန်းမြတ်ခဲ့တယ် ၁၀နှစ် ယနေ့တစ်နေ့ကိုတစ်သိန်းရှုံးတာ ၂နှစ်အဲဒီလိုရှုံးတာကို
ကြည့်ပြီးကုမ္မဏီကိုပိတ်လိုက်ရင် အလုပ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့တဲ့လေ။
၂၀၀၄ခုနှစ် ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လါပြီး လူသားအကျိူးပြုရန်မီးကုန်ရမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့…….
အာဏာရှိသူ ငွေကြေးချမ်းသာသူ လူသားအကျိူး ပိုပြီးလုပ်နိင်မှာပါ။
JJ (CLUB) နားမှာနေတယ်………
မမအိ ကအလုပ်သမားတွေဘက် ကခုလိုပို့စ်မျိုးလေးရေးသားပေးလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါ ဖတ်ရတာ တကယ့်ကိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်လိုက်ရပါတယ် မမအိ ၀မ်းသာသာဓုခေါ်မယ့်ရက်လည်း ရောက်လာပါစေနော် ။။။
မြန်မာပြည်၏ ဥပဒေများစာအုပ်ပေါ်မှ ဆင်း၍ လက်တွေ့ ဘဝသို့ ဦးတည်နိုင်ပါစေ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်ရိရော်ရိ နဲ့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းကြုံနေရတဲ့ အလုပ်သမားထုအားလုံး
မကြာခင်မှာ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာမယ် မြင်မိပါတယ်။
အရင်ပြည်ပ က လာလုပ်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေဟာ
ဒီမှာ လုပ်ခွင့်ပါမစ်အတွက် နေရာတိုင်းမှာ အဆင့်ဆင့် ပေးကမ်းစွန့် ကြဲခဲ့ကြရတော့
ူသူတို့ အတွက် ဖိနှိပ်စရာက ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်စရာ မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားတွေအပေါ် ပုံကျသွားခဲ့တယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ တစ်ဆင့်ချင်း ပြောင်းလဲနေပါပြီ လို့ မြင်နေရပါတယ် ။
ကိုပေပြောသလိုပါပဲ …ဦးသန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ တဆင့်ခြင်းပြောင်းလဲနေတာ အမှန်ပါ …. ။ အခုတလော စက်မှူဇုံတွေ စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်သမားခန့်ထားမှု၊ အသက်မပြည့်သူတွေကို လိမ်ပြီးစာရင်းပြင်နေတာလေးတွေ ၊ အလုပ်သမားတွေကို အသက်မေးရင် ဖြေတတ်ဖို့သင်နေတာလေးတွေ …မသိမသာ ကြားလိုက်လို့ ….. အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက သတိထားမိအောင် … ဟိုက်လိုက်လုပ်ပေးချင်လို့ ပို့စ်တင်ဖြစ်သွားတာပါ … ။
နောက်မှ ဈေးတက်ပြီး သန်းစိန်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ..လောလောဆယ်တော့ သိန်း ဘဲ ထားလိုက်ပါဗျာ….
ရေများ ရေနိုင် မီးများ မီးနိူင်ဆိုသလို ငွေများများပိုင်တဲ့လူက ငွေနဲ့အနိုင်ယူနေအုံးမှာပါဘဲ။ 2005 ကနေ 2008 လောက်ထိကျမ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုန်မဏီကြီးတခုမှာဆို သူဌေးသဘောမကျရင် HR တောင်မှအလုပ်ပြုတ်ပါတယ်။ လုပ်သက်ရင့် စီနီယာများကိုယ်တိုင် Dismiss ကိုကြောက်လို့ မှားမှား မှန် မှန်ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြတာကိုမြင်ရပြီး အတော်လေးစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ စက်ရုံများသာမက နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုန်မဏီအများစုမှာလဲ သူဌေးလူယုံ(သို့) တာဝန်ခံ ရာထူးရထားတဲ့လူတွေရဲ့ အရိပ်အကဲ ကြည့်ပြီးနေကြရတာပါဘဲ။ သူတို့ကဘဲ တဖက်ကို စကားပေါက်တော့ အဲဒိလူတွေ ဘာဘဲအလွဲသုံးစားလုပ်လုပ် မပြောရဲကြပါဘူး။ တုန်တုန် ပြောသလို အလုပ်ချိန်က အစ လုပ်ငန်းတာဝန်အဆုံး အသေးစိတ်ဖေါ်ပြထားတဲ့ စာချုပ်မျိုးနဲ့ အလုပ်သမားခန့်မဲ့ စည်းကမ်းရှိတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုထဲက ပေါ်ထွက်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို မြန်မာသူဌေးတွေက မိသားစုဆန်သောလုပ်ငန်းခွင်လို့ ပါးစပ်ကပြောပြီး အလုပ်သမားနဲ့တန်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တောင် ပြည့်အောင်မပေးချင်ကြလို့ပါ။ အလုပ်ခန့်တုန်းကသာ စာမချုပ်ချင်ရှိမယ် သင်တန်းလေးများ ထားပေးရဘီဆို ၅နှစ်တို့ ဆယ်နှစ်တို့လာချင်သေးတာကလား။ ဒါပေသိ အခြေခံအလုပ်သမား အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖတ်ရသလောက်တော့ အားတက်စရာပါဘဲ။ ချိုမိုင်မိုင်အက မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားဥပဒေ ပြဌာန်းတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လျှင်တေ့ာကောင်းမှာပဲ ။
အခုဆို လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေ ၊ မတရားမှုတွေ ရှိနေပေမယ့် အသံတိတ်နေရသူတွေလည်းရှိတယ် ။ ကိုယ်တွေပင်စင်စားမဖြစ်ခင်တော့ အလုပ်သမားတွေအတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အချိန်ခါမျိုးကြုံပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ် ။
ဖတ်တာတော့ အားလုံး ဖတ်ပြီးသွားပြီ ..
ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ မန့်တတ်ဘူးဂျ ..
မန့်ဂလည်း မန့်ချင် ..
မန့်ဂလည်း မမန့်ဒက်ဒေါ့ ..
ခုလိုဘဲ ဖတ်မှန်းသိအောင် မန့်ခဲ့ဘာတီ …
HR ဘက်နေ ရှေ့နေ နဲနဲလိုက်ပေးချင်ပါတယ် ။
အလုပ်သမား ၊ ၀န်ထမ်း အများစုက HR ကို ကယ်တင်ရှင်လိုမျိုး သဘောထားကြပါတယ် ။ တကယ်တော့ HR ၀န်ထမ်းသည်လည်း အလုပ်သမား ၊ ၀န်ထမ်း နဲ့ အတူတူပါဘဲ ။ သူတို့ ကူညီနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူလည်း အခြားသူများကဲ့သို့ ၀န်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
ံHR မန်နေဂျာ ဘဲ ဆိုပါတော့ ။ သူ အလွန်ဆုံးလုပ်နိုင်တာ အလုပ်သမားရဲ့ မကျေနပ်ချက် ၊ တောင်းဆိုချက်ကို သူဌေး နဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ထိခွင့်ရှိရင် သူဌေး ၊ မဟုတ်ရင် သူဌေးရဲ့ ကိုယ်စား အမြင့်ဆုံးအုပ်ချုပ်သူ (Managing Director , General Manager ) တို့ဆီကိုတင်ပြ ပေးနိုင်တာ ၊ အကြံပြုပေးနိုင်တာကလွဲရင် သူ့မှာ ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသလို လုပ်နှို်င်စွမ်းလည်း မရှိပါဘူး ။ သူဌေး (သို့) သူ့ အထက်အရာရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူက ပြန်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပေးရတာပါဘဲ ။ အဲ့ဒီ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုက်နာ နိုင် သဘော မတူနိုင် မလုပ်နိုင်ရင် အလွန်ဆုံးသူလုပ်နိုင်တာသူထွက်တာဘဲရှိမှာပါ ။
ဒါကြောင့် HR တွေကို့ အပြစ်တင် စွပ်စွဲနေ အမြင်မကြည်လင်ကြတာ အလကား ဘဲ မတရားဘူးလို့ထင်ပါတယ် ။
အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ မတရားတာကို ခုခံကာကွယ် ပေးနိုင်တာ ပေးရမှာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင် က လုပ်ရမှာပါ ။ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ဖွဲ့ခွင့် ပြုဖို့ အတွက် လုပ်ကိုင်ဆဲပါ ။ အဲ အဲ့ဒီကျရင်သာ ကိုယ် မဲပေးလိုက်တဲ့ ကိုယ့် သမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင် က ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အလုပ်သမား ၊၀န်ထမ်းများကလည်း သူ့စကားနားထောင်ပြီး စည်းလုံးနိုင်ရမှာပါ ။
အဲ့ဒီ့ အခါကျ HR Manager နဲ့ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်နဲ့ နောင်ဂျိန်ချကြရတာပါ ။ :grin:
ကျွန်မမြင်နေသမျှ ကြုံနေသမျှ HR တွေထဲမှာတော့ .. အများစုက သူဌေးဆန်စားလို့ … သခင်အားရအောင်ကျွန်ပါးဝနေတာတွေချည်းမို့ .. အချဉ်ပေါက်လာလို့ ရေးမိပါတယ် ။
HR ကို ကယ်တင်ရှင်လို့ မမြင်ပေမယ့် …. အလုပ်သမားနဲ့ သူဌေးကြားက ပေါင်းကူးတံတားမဟုတ်လားဟင် …. ။ ကြားခံ ဆက်ဆံရေးလုပ်ပေးသူမျိုးပေါ့ … ။ အလုပ်သမားက အခြေနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် သူဌေးနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဂျီအမ်လောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ခက်တဲ့အခါ ၊ HR တွေက ကူညီပြီး ကြားခံတဆင့်ပြောဆိုရမှာပါ ။ တဆင့်ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း … အလုပ်သမားကိုအက်ရှင်ချဖို့ .. တွန်းအားပေးတာမျိုး၊ အကြံပေးတာမျိုး ကို မဆိုလိုပါဘူး …. တိုက်ရိုက်ပြောခွင့်မရတဲ့ စကားကို ၊ သူက တဆင့်ပြောပေးတာမျိုးပါ … ဒါတောင် .. အလုပ်သမားက … တမျိုးပြောရင် သူက သူဌေးရှေ့တမျိုးပြောတယ် … ဟီး ဟီး
HR တွေကိုယ်တိုင်ကိုက …. သူဌေးကို ခေါင်းတောင်မော့မကြည့်ရဲတာ .. အလုပ်သမားနဲ့ သူဌေးကြားဘယ်လိုပေါင်းကူးတံတားဖြစ်နိုင်မှာလဲဟင် … ကိုထူးဆန်းပြောသလို သူဌေးနဲ့ အလုပ်သမားကြား ညှိမရလို့ HR က အလုပ်ထွက်သူတွေ .. ရှိကောင်းရှိပေမယ့် … ရှားပါတယ် … ။
ကျွန်မတို့ ရုံးက HR တွေနဲ့ .. ရုံးခွဲတွေက HRအများစု ကတော့ .. ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် သူဌေးကြောက်ကြတယ် … မျက်လုံးချင်းတောင် ဆုံပြီးစကားမပြောရဲသလို ၊ အပြန်လှန်ဆွေးနွေးမှုလည်း မလုပ်နိုင်ကြဘူး ။ အကြံပေးမှုဆို ဝေးရောပေါ့ …. ။ ဒါ့ပြင် အပေါ်ဖား … အောက်ဖိ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်ကြသလို ၊ ပတ်ချွဲ နှပ်ချွဲလည်း တတ်ကြတယ် ။ ဒီလို ကိစ္စလေးတွေကြောင့် .. HR တာဝန်မဲ့တယ်လို့ … စွပ်စွဲ လိုက်တာပါ …. ။
အလုပ်သမား သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းဖို့ လှမ်းနေကြပေမယ့် … ဘတ်ဂရောင်းက အလုပ်သမားဆိုလျှင် ကျောပဲရှိတယ် … အလုပ်ရှင်မှာက … ပိုက်ဆံ အပုံလိုက်ရှိတော့ … ကိစ္စအတော်များများကို …ငွေများ တရား နိုင်နဲ့ …… ဖြေရှင်းသွားကြမှာ ချည်းပဲ ………. စိတ်မောတယ်
etone အလုပ်က HR မြင်စေချင်လို့နဲ့တူတယ် .. :grin:
ကျွန်တော်က HR ၀န်ထမ်းမဟုတ်ပါဘူး ။ နိုင်ငံခြားသား HR Director ၊ နောက် နိုင်ငံခြားသား မရှိတော့ဘဲ မြန်မာ HR Manager နှစ်ယောက်လောက်နဲ့ တွဲ လုပ်ဖူးပါတယ် ။မနက်တိုင်း နိုင်ငံခြားသား General Manager နဲ့ morning briefing ကော အပါတ်စဉ် department head အစည်းအဝေးကော လုပ်ကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ အချိန်တိုင်း HR ဆရာတွေခင်ဗျာ သူတို့ အတတ်နိုင်ဆုံး တောင်းဆိုမှု့ ၊ လိုအပ်ချက်တင်ပြပါတယ် ။ ဘယ်လောက်တောင်းတောင်း ဘယ်လောက်ပြောပြော ဘယ်လောက် အတိုက်အခံပြောပေးပေး နောက်ဆုံး G.M ရဲ့ ဆူပူမှုခံရပြီး သှု့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးရပါတယ် ။ ၀န်ထမ်းတွေ စည်းကမ်းမရှိတာ ၊ လိုက်နာမှု့ မရှိတာတွေ ဆို သူတို့က အရင် အဆူခံထိပါတယ် ။
၀န်ထမ်း အများစုက တော့ ဒါတွေကို မသိကြပါဘူး ။ HR က ဘာမှ မလုပ်ပေးဘူးတာမြင်ကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလဲ လက်မခံကြပါဘူး။
HR ဆရာတွေက အမြဲပြောပါတယ် ။ ငါတို့ကို ၀န်ထမ်းတွေ အကောင်းမြင်ပေးတာ အလုပ်မခန့်မီလေး နဲ့ အလုပ်ခန့်တဲ့ အချိန် ခဏပါဘဲတဲ့ ။ :grin: :grin:
အဲ့ဒီ့ HR ဂျာကြီးနှစ်ယောက်လဲ အလုပ်မလုပ်ကြတော့ပါဘူး ။ တစ်ယောက်က အမျိုးသမီးပါ ။ သူကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ယောကျာင်္းလုပ်စားဘဲ ထိုင်စားနေတော့တယ် ။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ နှုတ်ကတိတွေပဲ ပေါပေါသီသီဖြစ်နေလို့လား ၊ စာရွက်များ ရှားပါးလို့ပဲလားမသိဘူး … အလုပ်ခွင်ဝင်လျှင် စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ လုပ်တဲ့ ဓလေ့ … အန်ဂျီအိုတွေကလွဲလျှင် … အလုပ်တော်တော်များများမှာကျင့်သုံးမှု အားနည်းတယ် ။
တုန်တုန်ရေ အဲဒါကတော့မြန်မာတွေရဲ့ယာဉ်ကျေးမှုလိုလိုဘာလိုလို ကျင့်သုံးလာကြတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါ၊ ဘရားသားလီးပါ၊ဖယ်မလီတိုက်ပါဆိုပြီးလုပ်နေကြတာ အစဉ်အလာလိုဖြစ်နေပါပြီ၊ တကယ်တိတိကျကျ လုပ်ဖို့ပြောတဲ့သူကိုတော့ ဒီကောင်ခပ်ကြောင်ကြောင်ကောင် လားလို့ကြည့်တာခံရဖူး ပါတယ်။
ဒါနဲ့စကားအတင်းစပ်လိုိ့ ခေါင်းစဉ်မူပိုင်ခွင့်လေး တော့ အလေးထားစေချင်ပါတယ်နော်………ခွစ်ခွစ်
ဒီပိုစ့်ကတော့ အလုပ်သမားအများအပြားနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အဓိကသက်ဆိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ခက်တာက အလုပ်သမားအခွင့်အရေး အပြည့်အ၀မရတဲ့နေရာတွေထဲမှာ အစိုးရပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဌာန တွေတောင် ပါနေတုန်းပါပဲ..။
အလုပ်သမားတွေရဲ့ ယေဘုယျအခြေခံအခွင့်အရေး နဲ့
အလုပ်ခွင်အပေါ်လိုက်ပြီး ရှိရမယ့် ရှိထိုက်တဲ့ သီးခြားအခွင့်အရေး တွေ ရှိပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေရဲ့ ယေဘုယျအခြေခံအခွင့်အရေးကို အလုပ်သမားတိုင်း ၀န်ထမ်းတိုင်း ပြည်သူတိုင်း သိအောင် ရှင်းလင်းတိကျစွာ ပြဌာန်းကြေငြာထားဘို့ လိုပါတယ်။ အလုပ်ခွင်တွေမှာ အဲဒါကို ရေးသားကြေငြာထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရှေ့တိုင်းက အလုပ်ရှင်တွေတော်တော်များများဟာ အလုပ်သမားကို ကိုယ်ကြိုက်သလိုခိုင်းဘို့ ကျွန်ငှားထားသလို စိတ်ထဲ ထင်မြင်နေပုံရလို့ပါပဲ။
အဲဒီစကားကို မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက- အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ မလေး၊ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ အင်ဒို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၊ ကိုရီးယား အစရှိသဖြင့် ကြားဖူးသမျှ နိုင်ငံတွေက အခြေအနေအများစုကို အခြေခံပြီး ပြောတာပါ။
အလုပ်ခွင်အပေါ်လိုက်ပြီး ရှိရမယ့် ရှိထိုက်တဲ့ သီးခြားအခွင့်အရေးတွေကိုတော့ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတွေက တခုစီတမျိုးစီအလိုက် လေ့လာစူးစမ်းချင့်ချိန်ပြီး သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။ အဲသည်မှာလဲ လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံတခုစီအလိုက် “ဆန်စင်ရာကျည်ပွေ့လိုက်” ပြီး သတ်မှတ်ပေးရမှာပါ..။
ပြီးတော့ အရေးကြီးတာက တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေကို တရားမ၀င်အခွင့်အရေးတွေနဲ့-
ထေတာ ၊ လဲလှယ်တာ၊ အပေးအယူလုပ်တာ မလုပ်ဘို့လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးမှာ အဲဒီအချက်ဟာ ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိနေပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အစိုးရဌာနတွေနဲ့ အလုပ်ခွင်တွေမှာပါ…။
အဲဒီအချက်က တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ခဲ့၊ ဖျက်နေ တာပါ…။
အင်း … မာမာအေးစကားလေး ယူသုံးလိုက်ချင်ရဲ့..
ပြောစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်………. လို့ …..
ွှအရာရာမှာ နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံးဆိုသလို စာချုပ်လေးရှိထားရင် ဖောက်ဖျက်ရခက်တာပေါ့။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား ပြဿနာကတော့ ရှေးကလည်းရှိ နောင်လည်းရှိနေအုံးမှာပါ။
အလုပ်ရှင်တွေဖက်ကလည်း မတတ်သေးတဲ့ အလုပ်သမားကို သင်ပေးပြီး တတ်တဲ့အခါ အခြားစက်ရုံအလုပ်ရုံပြောင်းသွားတာကို တားဆီးလို့မရတဲ့ ဒုက္ခခံနေကြရမှာပါဘဲ။
အမှန်တော့ ကတညုတ ကတဝေဒီ တစ်ဦးကျေးဇူးတစ်ဦးသိရမှာပါဘဲ။
အလုပ်ရှင်က အလုပ်ပေးလို့ အလုပ်သမားက လစာရသလို အလုပ်သမားက လုပ်ပေးလို့ အလုပ်ရှင်က ငွေဝင်တာပါ။
အပြန်အလှန် နားလည်ကြရင် လောကကြီးလှမှာပါကွယ်။
အလုပ်သမားတိုင်းက “ငါတို.သည် ဤလုပ်ငန်းနှင်.တကွ အလုပ်ရှင်အတွက် မရှိမဖြစ်သောသူများ
အလုပ်ရှင်တိုင်းကလည်း ” ငါနှင်.တကွ ငါ.လုပ်ငန်းသည် ငါ.အားအကျိုးဆောင်ပေးသူ အလုပ်သမားတို.
အတွက် ၊ ထောက်တည်ရာ မှီခိုရာ အရိပ်သဖွယ်ဖြစ်စေရမည် ”
ဒီလိုလေးဆိုဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ။ ခက်တာက ဒီလိုဖြစ်ဖို.နေနေသာသာ အိမ်မက်ထဲမှာတောင်
မလွယ်သေး …..။ တစ်နေ.ကျရင်တော. ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာပါ လို.သာ ခတ်လျော.လျော.မျှော်လင်.
အိပ်ခ်ျအာဆိုတာ သူဌေး၊ ကုမ္မဏီက ခန့်ထားတာလေ အီးဒုံးဂျီးရဲ့… လက်တွေ့ဆန်ဆန်ပေါရင် အလုပ်ရှင်အကျိုး သယ်ပိုးပေးရမှာပဲ။ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ဥပဒေများ ဘယ်လောက် သက်ရောက်မှုရှိသလဲအပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ကြမှာပေါ့။ အလုပ်သမားဖက်ကကြတော့ ယူနီယံ သမဂ္ဂများရှိရမယ်။ ပြီးတော့မှ ဘုတ်အဖွဲ့၊ ကော်မတီလိုမျိုးမှာ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များစုဖွဲ့ပီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဂျတာပေါ့။ အလုပ်သမားအကျိုး တကယ်ရှိဂျင်ရင် လွတ်လပ်တဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ရှိမှရမယ်။ ကြားက အိပ်ခ်ျအာဝန်ထမ်း၊ အက်ဒ်မင်ဝန်ထမ်း ဂျားညှပ်တာတော့ ဓမ္မတာပဲ။ ယူအက်စ်မှာ ယူနီယံဖွဲ့ခွင့်ပေးတဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေမှာ အသင်းဝင်ထားရင် လစဉ်ဂျေးပေးရတယ်၊ အလုပ်ပြုတ်သွားရင် သူတို့ဆီက ပြန်တောင်းလို့ရတယ်၊ ပီးတော့ အလုပ်လည်း ရှာပေးတယ်။ (
အလုပ်သမားကို မကြိုက်ရင် အလုပ်ရှင်ကလည်း အလကား လစာပေးထားမှာ မဟုတ်ဘူး။
အလုပ်သမားကလည်း ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိရင် အလုပ်ရှင်အပေါ်မှာ အနစ်နာခံပြီး လုပ်ကိုင်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီတော့လည်း ကံဆုံစား ဆန်ကုန်သွား လို့သာ ပြောလိုက်ချင်တော့တာပဲ။
မှန်ပါတယ်ကိုထူးဆန်းရေ…ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် HR တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးပါသည်
နောက်ဆုံးတော့ ကိုထူးဆန်းပြောသလို လုပ်နိုင်တာလုပ်တယ်ကွာဆိုပီး ထွက်ခဲ့တော့တာပဲ…ဟီး..
အလုပ်သမားတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ အဖွဲ့စည်း၊ အသင်းဖွဲ့မှန်သမျှ ကလည်း
အခုချက်ချင်းတော့ အလုပ်သမားအရေးတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်ပေး
နိုင်အုံးမယ်မထင်ပါ..ဒါပေမဲ့ အရင်ကနဲ့စာရင်တော့ နီးပြီထင်ဂျောင်းပါ….
အဆိုးဆုံးကတော့ ကျနော်တို့ဆီကလူတွေက စာချုပ်စာတန်းလုပ်ရင် မဖတ်ဘဲလက်မှတ်ထုိးတတ်ကြတာပါဘဲ။
စာချူပ်မရှိပဲ ဘယ်လို အလုပ်ခန့် လဲဗျ။
်မြန်မာပြည်မှာ စာချုပ်စာတန်းအာပလာနဲ့ လုပ်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပါ။
အရှင်းဆုံးပြောရရင် အလုပ်သမားဘက်ေ၇ာအလုပ်ရှင်ဘက်မှာ တိတိကျကျ ကာကွယ်ထား
ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ မရှိသလိုပါဘဲ။
ရှိရင်လဲ စာအုပ်ထဲဘဲရှိမယ် လက်တွေ့အသုံးမချနိုင်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်လေးပေါက်ရေ … ဗရမ်းဗတာတွေလုပ်ထားပြီး ..အခုမှ လူတွေ မျက်စိနည်းနည်းပွင့်လာတော့ … ဟာကွက်တွေမြင်တဲ့အခါ စိတ်မချမ်းသာစရာကြီးပဲ တွေ့လာရတာပေါ့လေ … ။
စကားမစပ် 14/07 ရက်နေ့က MRTV4 မနက်ပိုင်းသတင်းမှာ အလုပ်သမားအကြောင်းသတင်းလေးပါလာလို့ ..အမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိရင်း …. ဂေဇက်ကို ကျေးဇူးတွေ တသီကြီး တင်မိပါသေးတယ် … ။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်ရေးအတွက်ကို ILO ကနေ သင်တန်းလာပို့ချမှာဖြစ်ကြောင်းရယ် ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းဖို့အကြောင်းလေးတွေရယ် ၊ အသက်မပြည့်သူတွေ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေရယ် ပြောပြပေးတာ … မီဒီယာတွေပွင့်လင်းလာပြီဆိုတာ သက်သေပြနေသလိုပါပဲ … ။
အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေ ၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုလျှင်တောင်မှ ဆရာဝန်ရဲ့ ခွင့်ပြုထောက်ခံချက်ရယူပြီးမှ လုပ်ခွင့်ရှိသတဲ့တဲ့ …. ။
အစိုးရက … အရင်ကထက်စာလျှင်ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်တတ်လာတယ်ပြောရမယ်နော် … ။